နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ပူပြင်းတဲ့ Runner မှို(24 များအတွက်စုစုပေါင်း ပူပြင်းတဲ့ Runner မှို ထုတ်ကုန်များ)
ပူပြင်းတဲ့ Runner မှို - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
ကျနော်တို့တရုတ်ထံမှ ပူပြင်းတဲ့ Runner မှို ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း / စက်ရုံအထူးပြုနေကြသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားအဖြစ်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူလက်ကား ပူပြင်းတဲ့ Runner မှို / စျေးပေါ, တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်ဦးဆောင်သည့် ပူပြင်းတဲ့ Runner မှို များထဲမှ Ruizhun Precision Metal Co., Ltd. ။
tag ကို: ပူပြင်းတဲ့ Runner မှိုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း , OEM ဟော့ Runner မှို , အကြီးစားဟော့ Runner မှိုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
အကြီးစားပူပြေးသမားမှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုစီးဆင်းမှုရုပ်သံလိုင်း unfrozen ၏အတွင်းပိုင်းပစ္စည်းအောင်အပူပေးကိရိယာများ အသုံးပြု. မှိုဖြစ်ပါတယ်။ ပူပြင်းပြေးသမား၏အစိတ်အပိုင်းများ၏အရည်အသွေးကောင်းလှ၏,...
tag ကို: ပူပြင်းတဲ့ Runner မှိုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း , ပူပြင်းတဲ့ Runner အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများမှို , ပူပြင်းတဲ့ Runner မှို
ပူပြင်းတဲ့စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်း၏ပြေးသမားမှိုထဲမှာအရည်ပျော်အောင်ပူ Runner မှိုဦး se အပူ device ကိုအမြဲသံသရာဖွဲ့စည်းရိုးရာသေဆုံးသည်ထက်တိုတောင်း solidified မှိုမဟုတျဘဲဖြစ်ပါသည်, ပိုပြီးထဲမှာအအေးမရပြေးသမားတို့အတွက်စင်ကြယ်သော,...
tag ကို: အသေးစားဟော့ Runner မှိုထုတ်လုပ်မှု , OEM ဟော့ Runner မှိုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း , ပူပြင်းတဲ့ Runner မှို
tag ကို: ပူပြင်းတဲ့ Runner မှို , အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများမှို , injection မှိုထုတ်လုပ်မှု
ပူပြင်းတဲ့အပြေးသမားအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများကိုမှို, ပူပြေးသမားစနစ်ကတစ်ခုတည်းခေါင်းကိုပူပြေးသမားစနစ်ကသို့ကွဲပြား, Multi-ခေါင်းကိုပူပြေးသမားစနစ်နှင့်အဆို့ရှင်တံခါးဝပူပြေးသမားစနစ်။...
tag ကို: အရောင် Shell ကထုတ်လုပ်မှု , နှစ်ချက်အရောင်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှု , နှစ်ချက်အရောင်ကုန်ပစ္စည်း Injection ကိုမှို
နှစ်ချက်အရောင်ဆေးထိုးမှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှစ်ဆအရောင်ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု, နှစ်ဆအရောင်ထုတ်ကုန်ဆေးထိုးတန်ဆာနှစ်ချက်အရောင်ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောလျှပ်စစ်ချုပ်ကိုင်ခလုတ်, ထုတ်ကုန် shell ကို, ပလပ်စတစ်ဆုကြေးဇူးကို box...
tag ကို: အကြီးစားအော်တိုမှို , အကြီးစားအစိတ်အပိုင်းများမှို၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ , အကြီးစားမော်တော်ယာဉ်မှို
ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းမှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှု, ကြီးမားတဲ့အော်တိုမှို, ကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းမှို, အာကာသစက်မှုလုပ်ငန်းဆက်စပ်ပစ္စည်း, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးစက်ကိရိယာများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း, ယေဘုယျအားဖြင့်ကြီးမားသောအရွယ်အစားကိုရည်ညွှန်း,...
tag ကို: စက်အစိတ်အပိုင်းများ Casting Die , အစိတ်အပိုင်းများဒီဇိုင်း Casting Die , အစိတ်အပိုင်းများဝယ်သူများ Casting Die
မဂ္ဂနီစီယမ်သတ္တုစပ်ထိုကဲ့သို့သောအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့လျော့ပြေနှင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင် porosity မှအနိမ့် sensitivity ကိုအဖြစ်အချို့သောထူးခြားတဲ့ solidification ဂုဏ်သတ္တိများ, ရှိသည်, ထို့ကြောင့်ပိုကောင်းထိုကဲ့သို့သောလူမီနီယံနှင့်ကြေးနီကဲ့သို့သောအခြား ချ....
tag ကို: ပလပ်စတစ် Toy အပိုင်းမှို , အစိတ်အပိုင်းများမှိုနေမှုကိုချေဖျက် , နှစ်ချက်အရောင် Injection ကိုမှို
နှစ်ချက်အရောင်ဆေးထိုးတန်ဆာနှစ်ခုရိုက်ချက်သို့မဟုတ် Multi-shot တန်ဆာတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာမတူညီတဲ့ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူနှစ်ဦးကိုအရောင်အစိတ်အပိုင်းရနိုင်အောင်ဤအမှုကိုပြုသောဖြစ်ပါတယ်။ အဆင်းလှသော Multi-function...
အကြီးစားဟော့ Runner မှို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြင့်မားသောဖိအားမဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းအစိတ်အပိုင်းများမှို Casting Die အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Wholesale ပူပြင်းတဲ့ Runner မှို from China, Need to find cheap ပူပြင်းတဲ့ Runner မှို as low price but leading manufacturers. Just find high-quality brands on ပူပြင်းတဲ့ Runner မှို produce factory, You can also feedback about what you want, start saving and explore our ပူပြင်းတဲ့ Runner မှို, We'll reply you in fastest.